Izvi zviri mugwaro raburitswa nesangano iri, iro riri kurumbidza hutungamiri hwemauto nekutora danho iri murunyararo, pasina kuvhiringidzwa mabasa evanhuwo zvavo.
Mumwe wemasachigaro ebatanidzwa uyu, uye vari mutungamiri webato reMavambo/Khusile/Dawn, Doctor Simba Makoni, vanoti mubatanidzwa wavo uri kukurudzira hutungamiri hwemauto kuti hupe mukana kumapoka ose ari munyika mukutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, kwete kupa vezvematongerwo enyika chete.
Mubatanidzwa uyu unoti unotambirawo nemufaro chivimbiso chemauto chekuti haana kutora masimba asi kuti ari kugadzirisa matambudziko ari kutadzisa nyika kuenda mberi.
“Vari kuzvipira kuti izvi vaitira kubatsira kuti nyika iwane kugadzirisa matambudziko ari kunetsa vanhu. Chinhu chakanakawo zvakare, mukana watanga tichitsvaga,” Doctor Makoni vanodaro.
Vanoti CODE inotsigira zvizere hurongwa hwekudzosa nyika kuhutongi hwejekerere, uye hutungamiri hwavo hwakazvipira kubatsira pamwe nezvose zvainokwanisa kubatsira nazvo mukutsvaga nzira dzinobatsira mukugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe.